AmaHackorant Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Ufuna ukuthola izandla zakho kuHerodant Hack ethembekile? Nge-Gamepron, noma yini kungenzeka! Ngezici ezitholakala kuphela ezisongelwe kwiphakeji elingatholakali, iyona engcono kakhulu yeValorant Cheat ozohlangabezana nayo.
Usuvele uthenge iHalorant Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Sicela wazi: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Valorant hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Ukuhlola Hacks
Ama-Valorant Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Hyper likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga Ukuhlola Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuthenga ukhiye womkhiqizo ku-Gamepron (kuningi ongakhetha kukho!)
Ukusuka lapho uzofuna ukukhetha i-hack evumelana kangcono nezidingo zakho (i-Aimbot, iWall Hack, njll.)
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa iprosesa yethu yokukhokha ekhethekile nephephile, ukuqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende
Lapho usuthengile ukhiye ungawusebenzisa ukuthola ukufinyelela kuma-hacks / cheats akho!
Kungani ama-hacks we-Gamepron Valorant?
AbakwaValorant's devs bebenza umsebenzi omuhle kakhulu wokugcina umdlalo uvuselelwe, futhi ngokukhishwa kwePatch 3.04, kube nezinguquko ezithile eziphawulekile kulo mdlalo. Olunye lwezinguquko eziphawuleka kakhulu lubandakanya ukuthi kulandelwa kanjani izibalo zokusebenza, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwememori yekhompyutha yakho nokulahleka kwepakethe.
Isibuyekezo sakamuva kakhulu seValorant besigxile kakhulu ekwenzeni ngcono ukusebenza kwangaphakathi komdlalo ukuze kubukeke kangcono. Izibalo ezisetshenziselwe ukuphikisa ukusikwa zisetshenzisiwe kabusha ukuze ukunqampula kungajwayeki, kepha ungalindeli ukuthi kuzosuswa ngokuphelele.
I-patch 3.00 yakwaValorant yethule i-ejenti entsha kulo mdlalo: KAY / O, noma i-patch nayo ibone izinguquko ezengeziwe zebhalansi. Isibonelo, zonke izikhali zishintshiwe ukuze zikwazi ukulingana, futhi ama-ejenti nawo alinganisiwe ukuze amakhono abo angenzi ukuthi i-meta ikhethe enye.
Isiqephu esilandelayo seValorant senzelwe ukuba sibe yiPatch 2.10, kepha sibambezelekile futhi ushintsho lwaso esikhundleni salokho sabuyiselwa emuva kuPatch 2.11. Isizathu salokhu ukuthi iRiot Games izosebenzela ukuqhubeka nokwenza ngcono injini yomdlalo ukuze kube lula ukubuyekeza nokusebenzisa ukulungiswa kwamaphutha.
IValorant ayiwona umdlalo walabo abasha emidlalweni yokudubula, futhi singasho nokuthi kungcono kushiyelwe labo abebedlala iziqu ze-FPS kusukela besebancane! AbakwaValorant benze ezibukwayo kulo mkhakha kulo nyaka ngokuthi bazuze ikhono ngaphezu kwakho konke okunye, futhi kubukeka sengathi bakwenzile impela lokho - abantu abadlala umdlalo bazokuqonda ukuthi kwanelisa kanjani ukushesha weqe ekhoneni bese udubula umphikisi kukhakhayi. Ngezici ezingenasici njenge-Valorant Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kanye neNoRecoil, sibeka amandla emidlalo yobuchwepheshe ngqo ezandleni zakho.
Kunemihlupho eminingi eza nokudlala iValorant, futhi uma uvulela umdlalo okokuqala ngqa kungakhathaza (ukusho okuncane). Akunasistimu esezingeni ebekiwe njengamanje okusho ukuthi wonke umuntu uzofaniswa nomunye, ayikho “isilinganiso samakhono” sokuhlukanisa abadlali. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthi uphathwe kaninginingi kuze kube yilapho usuthuthukise amakhono owadingayo wokuncintisana. Abanye bethu abanaso isikhathi esidingekayo sokucija amakhono ethu eValorant, kanti abanye abafuni nje ukuzikhathaza - yingakho ama-Gamepron Valorant Hacks ethu efuneka kakhulu!
IHalorant Hack yethu ekuqaleni yadalelwa ukuhambisana nezidingo zokuncintisana zabadlali kulo mdlalo, njengoba siqonda ukuthi kuzokhula lapha kuphela. Uma ubufuna ukufaka unyawo lwakho emnyango futhi ube ngumpetha weqiniso weValorant, ukusebenzisa amaValorant Hacks wethu kanye nokukhohlisa kuzokufikisa “esicongweni” sakho ngokushesha okukhulu kunanoma iyiphi enye indlela. Umhlinzeki wakho we-hack ojwayelekile uzobheka amathuluzi ethu ngokumangala, ngoba bazozibuza ukuthi sikwazile kanjani ukupakisha izici eziningi kangaka ezisezingeni eliphakeme kwiphakethe elincane elihlanzeke kangaka! Zonke izinto esizikhohlisayo azitholakali ngo-100%, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngezinhlelo zokulwa nokukopela ezikuthola.
Musa ukuchitha phambi kwesikrini sakho sekhompyutha uzama ukuncintisana nokujuluka, vele unike amandla ama-Valorant Cheats wethu futhi ubuke amaphuzu akho! Kunezinhlamvu eziningi ezahlukahlukene ongazisebenzisa kuValorant, futhi ngenkathi amandla abo ezokwehluka, uzohlala unezinga elifanayo lekhono ongathembela kulo uma uneGamepron eceleni kwakho.
IValorant Wall Hack (ESP)
Imininingwane yeValorant Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-Valorant Item ESP enezihlungi
Izexwayiso zesitha ezinamandla
Imodi ye-Valorant super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
Valorant bone & aim key okulungisekayo.
Isinxephezeli seValorant Recoil
Impela Ukuhlola Hack Izici
Ukuhlwaya abadlali bezitha abakha amatende noma abatholakala ngemuva kwezindawo eziqinile / ezi-opaque kwenziwa kube lula uma unikwe amandla i-Player ESP yethu.
Imininingwane yomdlali we-Valorant ihlala itholakala nge-Valorant ESP yethu, ekuvumela ukuthi ubone amagama abadlali, imigoqo yezempilo, namabanga abo.
Ukwazi ukuthi yiziphi izikhali nezinto umphikisi wakho asebenza nazo kungabalulekile kwesinye isikhathi. Kungakho i-Item ESP enezihlungi kubalulekile ukufaka ku-Hack yethu eyiValorant.
IValorant Aimbot yethu izokusiza ekukususeni ethembeni eliya kumchwepheshe ophucuziwe ngokunemba okungenangqondo, ishiye abaphikisi bakho bebambe ongezansi.
Ithrekhi yeValorant Bullet (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
Sebenzisa iValorant Aimbot yethu ukugcina ithrekhi yezinhlamvu zakho ngesici se- "Bullet Track" (esilungele amabanga amafushane naphakathi nendawo).
Umlayezo oyisixwayiso uzovela esikrinini sakho lapho isitha siqonde kuwe noma sivele sisondele.
Imodi ye-Valorant super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Abasoze balindela ukuthi wehle usuka ekuphakameni okunje! Sebenzisa imodi yethu ye-Super Jump ukugwema ukuthatha umonakalo wokuwa ngenkathi udlala i-Valorant.
Valorant bone & aim key okulungisekayo
Lungiselela i-Valorant Aimbot noma ngabe ungathanda! Iza ifakwe i-Bone Prioritization nezinye izinketho ezilungisekayo ezifakiwe, ikunikeza indlela yokusebenza okuningi kunamanye ama-Valorant Hacks
I-Valorant Aimbot yethu nayo ifakwe isici se- "Visible Checks", esikunikeza ithuba lokuthi ubheke ukuthi izinhlamvu zakho zenza muphi umthelela.
Ukubuyisa isinxephezelo kuyingxenye enkulu ye-Valorant Hack yethu, njengoba ikuvumela ukuthi udubule izitha zakho ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni.
Yiba Umdlali Ohamba Phambili Ohamba Phambili Emhlabeni!
Isimangalo esinesibindi sokwenza, nakanjani, kepha siyazi ukuthi ama-Valorant Hacks ethu angaba namandla kangakanani kubadlali abalungile. Ungaba umdlali weValorant ongcono kunabo bonke emhlabeni, konke okuzothatha ukuzinikezela nokufinyelela kumaValorant Hacks anokwethenjelwa kakhulu. I-Gamepron ifuna ukukusiza ube nempumelelo ethe xaxa (futhi ibe mnandi ngokwengeziwe!) Ngenkathi idlala iValorant!
AmaHack Valorant adumile nama cheats
IValorant ESP neWallhack
Amanye amaHackor Valorant and Cheats
Ama-Valorant Hacks nama-Cheats andile ekuthandweni ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, njengoba umdlalo ukhishwe ngokusemthethweni ngo-2020. Sihlala sizama ukuhlala phezulu kwezinto lapha eGamepron, yingakho sihlale sibheka okuthandwa kakhulu izici ezikhona ngaphakathi kwanoma iyiphi i-Valorant Hack. Asibandakanyi kuphela izici abasebenzisi bethu abazicele kakhulu, kepha sifake nezici ezimbalwa ongeke walindela ukuzibona! Ukugcina ubukhona bethu njengomholi ngaphakathi komkhakha wokuthuthukiswa kwe-hack, sihlala sifuna izindlela zokwenza ngcono kuma-cheats ethu - yingakho saziwa njengomhlinzeki we- # 1 wama-Valorant Hacks online!
Lapho ufuna ukufinyelela kuma-Valorant Hacks athandwa kakhulu futhi aphambe ku-inthanethi, i-Gamepron izokugcina ulungiselelwe futhi ukulungele ukugoqa. Akunakushiwo ukuthi yini esizoyinikeza abasebenzisi bethu ngokulandelayo, ngakho-ke kuze kube yileso sikhathi ungalawula ngama-Valorant Hacks wethu aphume njengamanje futhi aphambe.
Ama-Aimbots azohlala eyingxenye ebalulekile yomphakathi wokugenca inqobo nje uma singasho ngoba ukunemba kuzohlala kunquma ukuthi ngubani onqobile ku-Valorant. Ayikho imiphumela engahleliwe ongayithola, njengoba uzoklonyeliswa ngokufaka kwakho umsebenzisi - yingakho ukugenca eValorant kuyinto enhle kakhulu ukuyenza. Ngenkathi abanye bezobe bejuluka ngamahembe abo, uzobe umatasa ngokunganaki ushaya wonke amaqembu phansi. IValorant Aimbot yethu ifakwe izinto eziningi ezisebenzisekayo, konke okuzokuvumela ukuthi uthathe noma yimuphi umdlalo oyingxenye yawo.
Ukuthandwa kwe-Bone Prioritization ne-Auto-Aim / Fire kukhona lapha, kepha futhi uzobona ukuthi iValorant Aimbot inezinhloso zeSmooth Aiming. Ungavula i-Instant Kill bese ukhipha abaphikisi ngokuthanda kwakho, futhi ungenza kanjalo ngaphandle kokuzidonsela amehlo. Uzodlala isilinganiso se-K / D esingenangqondo ngama-Valorant Cheats wethu anikwe amandla!
Ukusebenzisa i-Valorant ESP neWall Hack ngeke kukuvumele kuphela ukuthi udlondlobale njengomdlali wedwa, kepha kuzonikeza neqembu lakho isandla esiphakeme. Uma ukhulumisana nabo ngezindawo zezitha, zingakusiza futhi zikusize uzuze imidlalo eminingi - ungakhetha futhi ukuthula bese uzisindisela okubulala okuningi! Ukusebenzisa i-Valorant ESP yethu kuzokuvumela ubone ukuthi hlobo luni lwezibhamu umphikisi wakho alusebenzisayo, nokuthi unempilo engakanani asele nayo (nokuthi isondele kangakanani / ukude kangakanani kuwe). IValorant Wall Hack yethu izohlala ilungele ukubona ababonisi bemikhumbi abacathama emakhoneni nasezakhiweni, ikakhulukazi eValorant.
Uma uke wadlala iValorant ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ukubheka ekhoneni kuyingxenye enkulu yomdlalo, futhi kungaba yinto enqumayo yokuthi ubani ophumelela umjikelezo. Uzokwazi ukubona noma yini nakho konke nge-Valorant ESP yethu neWall Hack enikwe amandla, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokukhipha ikhanda lakho bese ubhujiswa.
Isici se-Footprints se-Valorant Hack yethu silusizo olukhulu kunoma iyiphi imodi oyidlalayo, njengoba ukugcina umkhondo wezitha zakho akukaze kube lula kanjena. Uma ucabanga iqiniso lokuthi une-Valorant ESP neWall Hack ngaphezulu kwalokhu ozosebenza ngakho, akukho mphefumulo odlala iValorant ongacasha emehlweni akho abukhali. Uzobona yonke into eqhubekayo kulo mdlalo, futhi lapho ubona izinyawo zikuholela ekuphangeni, ungavumela isici se-High Damage bese uziqeda ngokushesha.
I-hack ye-Distance ilungele ukukwazisa ukuthi isitha sihamba noma cha, sikuvumela ukuthi ubone abahamba ngezinkambi ngokushesha. Hhayi lokho kuphela, kepha uzokwazi nokubona ukuthi ngabe kukhona umuntu ozama ukusunduzela endaweni yakho - noma ngabe isitha senzani, uzobafunda njengencwadi. Inhlanganisela yazo zontathu izici ikunikeza ithuba kuyo yonke impi oyilwayo, kungakhathalekile ukuthi zingaki izitha ezikhona!
Sinezinto eziningi ezinhle kakhulu esingakhuluma ngazo uma kukhulunywa ngama-Valorant Hacks ethu, kepha okunye okubaluleke kakhulu isici abaphuculi abalahlekele kuzo kungaba ukuvikela ukulwa nokukhohlisa. Izindlela zethu zokuvikela zivikelekile futhi zitholakala kuphela ngamathuluzi atholakala lapha ku-Gamepron, enikeza ukuthula kwengqondo kubo bonke abasebenzisi bethu. Noma ngabe ukopela i-akhawunti entsha sha noma obusuyisebenzisa iminyaka, sihlela ukugcina wonke amakhasimende ethu ephephile emiphumeleni yokukopela.
Ngokugenca okungatholakali okungu-100%, ungenza noma yini ongathanda ukuyenza eValorant, njengoba ukwenza inqubekela phambili kuzoba umoya (uku
usho okuncane). Sinohlelo lokusekelwa kwamakhasimende olumangalisayo okufanele silucabangele lapha e-Gamepron, ngakho-ke uma kuvela izingqinamba ezizungeze ama-Valorant Hacks wakho nama-Cheats, unganqikazi ukuxhumana nathi. Kungumdlalo omusha futhi ngenkathi ithuluzi lethu nalo lisha, sisazoligcina libuyekeziwe ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ajabule ngokuthenga kwabo!
Kungani ama-Valorant Hacks ethu
IValorant akuwona umdlalo ofuna ukuwudlala ukuze uzijabulise, njengoba abantu abaningi beya kuwo njengendawo yokuncintisana. Lokhu kusho ukuthi kunabadlali abaningi abasezingeni eliphezulu abakulungele ukukhahlela amazinyo akho, kodwa ungakhathazeki! Ngokusebenzisa ama-Valorant Hacks ethu, uzozibeka ethubeni lokuthi ungaphumeleli nje kuphela kepha ujabule ngokwengeziwe ngenkathi wenza kanjalo.
Kungani iValorant Aimbot yethu
IValorant Aimbot elungile yiyona ezoshintsha indlela osebenza ngayo ngokuphelele. Awudingi ukucasha emathunzini bese ulinda ithuba lokubulala umuntu, ungadlala ngolaka futhi ulandele wonke umdlali ombonayo! Uzothola amaphuzu amaningi, inhlonipho ethe xaxa, futhi ube nobumnandi obuningi ngenkathi udlala umdlalo lapho i-Valorant Aimbot yethu yenziwe yasebenza. Akusekho ukulahlekelwa kwakho!
Kungani i-Valorant ESP yethu
Iphuzu lonke lokuthenga ukufinyelela kuma-Valorant Hacks ethu yingoba likuvumela ukuthi ube nenzuzo. Ufuna ukuzuza okuningi ngangokunokwenzeka, futhi ukuqoqa imininingwane usebenzisa i-Valorant ESP yethu kuzosiza impela. Uyabona uma izitha zinezikhali ezithuthukisiwe noma ngabe ziphansi empilweni. Iya kwesitha esibuthakathaka noma uthathe abagibeli nge-Valorant ESP yethu.
Kungani iValorant Wallhack yethu
Kubukeka sengathi konke okunye ukufa obhekana nakho eValorant kungenxa yokuthi umuntu othile ukanise noma avele ngokushesha ekhoneni. Njengoba kunjalo, ungasebenzisa iValorant Wall Hack yethu ukubona izinsongo ezingaba khona ezicashe ngemuva kwezindonga futhi ukanise izimpilo zabo kude - kulapho-ke lapho ungazinyenyela khona futhi unikeze ubulungiswa obushesha! Amakhamera akaze aphumelele, siyakwazi lokhu.
Kungani i-Valorant Norecoil yethu
Ukuthola kabusha kuzoba yinkinga enkulu kubadlali abasha, ngoba kuzoba nomthelela omubi ekutheni ukudubula kwakho kunembe kangakanani. Awukwazi ukushibilika uma kukhulunywa ngokunemba, futhi uma ungafuni ukukwenza kube “sobala” ukuthi ukopela neValorant Aimbot, ukusebenzisa umsebenzi wethu weValorant NoRecoil kufanele kube yinto elandelayo engcono ongayisebenzisa. Inhloso yakho izohlala iyiqiniso ngomsebenzi wethu weNoRecoil osebenzayo.
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-Valorant?
Okokuqala, uzodinga ukuthenga ukhiye womkhiqizo kithi. Lapho usuthole ukhiye womkhiqizo kwaGamepron, ungawusebenzisa ukuthola ukufinyelela kunoma yimaphi amaHackorant Hacks ethu amangalisayo - inqubo yokulanda / yokufaka ilula futhi izisebenzisela ingxenye enkulu! Uma ungafuni ukubhekana nokufakwa mathupha kwama-Valorant Hacks akho, uzothanda lokho i-Gamepron enakho kumakhasimende ayo.
Kungani ama-Valorant hacks wakho ebiza kakhulu kunamanye
I-Gamepron iyisevisi ekhethekile engabhekela kuphela inani elithile labantu ngasikhathi. Kukhona kuphela inani elikhethiwe lezikhala ezitholakalayo kubasebenzisi bethu, futhi ngenxa yalokho, kufanele sikhokhise "intengo ye-premium" ukuqinisekisa ukuthi asinabantu abaningi kakhulu abangena kuseva ngasikhathi sinye. Hhayi lokho kuphela, kepha ukukopela kwethu akubonwa ngo-100%!
Sinezinketho ezintathu ezihlukile zabasebenzisi lapha eGamepron, konke okuzokuvumela ukuthi uphathe izidingo zakho zokugenca noma ngabe uzizwa ulingana. Ungakhetha ukuthenga ukhiye womkhiqizo osebenza nsuku zonke, ngenyanga, noma ngonyaka; besifuna ukunika abasebenzisi bethu izinketho eziningi ngangokunokwenzeka futhi sizizwe sengathi lezi zinketho ezintathu yizona ezingcono kakhulu ongazisebenzisa.
Awesome Ukuhlola Hack Izici